3 Ebumnuche mere franch dị mma maka akụ na ụba? | Franchiseek
3 Ebumnuche mere franch dị mma maka akụ na ụba?
»3 Ebumnuche mere franch dị mma maka akụ na ụba?
Franchising bụzi nhọrọ ewu ewu maka ndị ọchụnta ahịa ọ bụla ma ha nwere obere ma ọ bụ nnukwu azụmahịa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche ihibe azụmaahịa gị taa, anyị ga-ekekọrịta ihe 5 maka ihe kpatara iji mekọrịta azụmahịa gị nwere ike bụrụ nnukwu echiche maka gị iji nyere akụ na ụba aka.
1.) Franchising na-enye ọtụtụ ọrụ
Franchising dị mma maka akụ na ụba dịka ọ na-enye ọtụtụ ọrụ n'obodo gị. Kedu ihe na - enyere akụnụba aka ịba ụba nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbasa azụmahịa gị ma nye ọrụ n'otu oge iji nyere obodo gị aka ajụjụ dị mfe nke gịnị kpatara na ọ bụghị?
2.) Franchising bulie nde mmadụ maka enyemaka
Nke abuo, abuo nke oma abachaala nma maka onodu aku na uba ebe obu na o nuputa otutu nde mmadu maka enyemaka ndi ahuru n’aho obula. Nke a bụ ihe gbakwunyere maka ịgbanwu achịcha ebe ọ bụ na ọ na-enye gị ohere inyere ndị chọrọ ya aka n'ezie.
3.) Franchising dị mma maka itolite akụ na ụba akụ na ụba
Ugbu a, anyị ga-ekekọrịta ụfọdụ ọnụọgụgụ nke ekpokọtara na United States. Mana kwesịrị inye gị ezigbo echiche nke otu aha nnụnụ si eme ka akụ na ụba ụwa niile.
Ị maara? Na USA kwa afọ, itinye aka na njikwa na-eso akpata akụ na ụba dị $ 1.3 ijeri dọla na-enyere ya aka ọ bụghị naanị ịdị ndụ na ọ na-enyere akụnụba aka ịba ụba.
Anyi nwere olile anya na edemede a dị mkpirikpi enyerela onye ọ bụla na-achọ ịbanye ọrụ aka iji nye ha echiche banyere otu ha si enwe mmetụta dị mma ọ bụghị na mpaghara ha ọ na - enyere aka ịgbasa akụ na ụba niile. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ego na ohere ịchụrụ ya ohere iko mba ofesi.
Isi mmalite: Forbes, Statista, Ibisworld